Raha araka ny fanazavany dia tsy nisy mpanadio mihitsy ny tanana tao anatin’ny dimy volana tsy nahateo azy ka nikolay daholo ny mponina. Na izany aza anefa hoy izy dia isaorana ny malala-tanana fa tena manampy sy manohana ny kaominina Ivato tokoa. Tamin’ny herinandro lasa teo dia teny Mandrosoa no nanaovan’ny kaominina ny asa fanadiovana. Ao an-tsena indray amin’ity herinandro ity. Tanjon’ny Ben’ny tanàna Penjy Randrianarisoa ny hisorohana ny mety ho fiparitahan’ny valan’aretina ao Ivato amin’ny maha vavahadin’i Madagasikara azy ho fiarovana ny fahasalaman’ny mponina. Aorian’ny asa fanadiovana dia nambarany fa hiroso amin’ny fanamboarana fotodrafitrasa ny tenany ka anisan’ireny ny fametrahana jiro hahafahana miady amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny fanamboarana ireo lalana potiky ny ranon’orana. Efa eo am-pandinihina ny tetibola amin’ity taona 2020 ity moa ny kaominina Ivato ankehitriny.